Nagu saabsan - Hebei Tiknoolajiyad Caafimaad oo Ku-saleysan Caddeymo Co., Ltd.
Dib u soo kabashada
Caafimaadka oo dhan hal mashiin xz2010-106, Meridian analyzer Wall wuxuu ku rakibay nidaamka baaritaanka guud, wfk Ciladda guud ee Nidaamka Daawada Shiinaha, HRE nidaamka qiimeynta halista caafimaadka 12 baaritaanada jireed ee joogtada ah, Maareynta qiimeynta halista Caafimaadka Shaqaalaha kaydinta elektaroonigga ah iyo qaabeynta xogta weyn.
Xz2010-106, mitirka sonkorta dhirtu mitirka gulukooska:
Kahor iyo kadib cuntada, gulukoosta dhiigga, cadaadiska dhiigga iyo baaritaanka oksijiinta dhiigga. Xog-celinta waqtiga-dhabta ah, nafaqada khadka tooska ah ee internetka ayaa soosaartay Barnaamijka cuntada caafimaadka leh.
Caafimaadka oo dhan ku jira hal mashiin xz2010-106, watch smart smart furaash, Xikang Xinxibao: (hurdo, guri) Joogtada ah baaritaanka jireed, kormeerka waqtiga dhabta ah ee bukaanka Calaamadaha muhiimka ah, soo celinta xogta, - furaha wicitaanka degdegga ah ee SOS.
X8 saacad curcurka caqliga leh, qalabka korontada ku shaqeeya ee loo yaqaan 'electrocardiograph' Xikang xinxinbao: (out) La socodka waqtiga dhabta ah ee calaamadaha muhiimka ah, ka hortagga cudurada daba dheeraada; Soo celinta xogta waqtiga dhabta ah, kormeerka waqtiga dhabta ah. Hal taabasho wicitaan deg deg ah SOS, dhakhaatiirta, xubnaha qoyska kormeerida iyo meeleynta khadka tooska ah.
Wfk TCM nidaamka baaritaanka dhameystiran, HRE nidaamka qiimeynta halista caafimaadka, madal AI dariiqa caanka ah khabiiro caan ah ayaa si toos ah ugala falgala khadka tooska ah, waqtiga dhabta ah ee cusbooneysiinta kaydka elektarooniga ah iyo soo bandhigida xogta weyn Calaamadaha muhiimka ah, hagida daawada iyo falanqaynta iska caabinta daroogada Xarumaha dawooyinka silsiladaha bulshada ee caafimaad ayaa gaarsiiya guriga daawo. .
Raadso talo caafimaad
Terminal caaqil ah, kanaal gudbinta cagaaran: Isbitaalka Xuanwu, Isbitaalka Kuliyadda Caafimaadka ee Union, Wadashaqeynta Hierarchical ee baaritaanka iyo daaweynta. (qiimeyn, kormeer, daaweyn faragelin ah Maareynta caafimaadka) Kheyraadka caafimaad ee sedexda isbitaal ee A ugu sareysa ee ku yaal Shiinaha Daaweynta dibada, iwm.